Iimagnethi kwiindaba: Uphuhliso lwamva nje lweRare Earth Element Supply
Inkqubo eNtsha yokuSebenzisa iMagnethi
Oososayensi kwilebhu yophando ye-Ames benze indlela yokugaya baphinde baphinde benze iimagnethi ze-neodymium ezifunyenwe njengenxalenye yeekhompyuter ezilahliweyo. Inkqubo yaphuhliswa kwiZiko laseMelika laseMelika leZinto eziBalulekileyo zeZinto (i-CMI) egxile kubuchwephesha obusebenzisa ngcono izixhobo kunye nokuphelisa isidingo semathiriyeli ephantsi konikezelo lokuphazamiseka.
Ukukhutshwa kweendaba okupapashwe yiLebhu ye-Ames kuchaza inkqubo ejika iimagnethi ezilahliweyo (i-HDD) kwiimagnethi ezintsha kumanyathelo ambalwa. Obu buchule bokuphinda busebenze ngokutsha bujongana nemiba yezoqoqosho kunye neyokusingqongileyo ehlala ithintela ukungcola kwemigodi ngezinto ezixabisekileyo.
Ngokuka-Ryan Ott, isazinzulu e-Ames Laboratory kunye nelungu leqela lophando le-CMI, “ngesixa esanda ngokwanda se-elektroniki ezilahliweyo kwihlabathi liphela, kusengqiqweni ukugxila kowona mthombo ukuyo yonke indawo yeemagnethi zomhlaba ezinqabileyo ezixabisekileyo kuloo mlambo wenkunkuma. —Ehard disk drive, ezinomthombo wesixhobo esisesazulwini. ”
Oososayensi noosomashishini bajonge iindlela ngeendlela zokukhupha izinto ezinqabileyo zomhlaba kumdaka, kwaye abanye babonakalisile isithembiso sokuqala. Nangona kunjalo, "ezinye zenza iimveliso ezingafunekiyo kwaye izinto ezifunyenweyo kusafuneka zifakwe kwisicelo esitsha," utshilo u-Ott. Ngokususa amanyathelo amaninzi okuqhubekeka ngokunokwenzeka, indlela ye-Ames yelabhoratri iguquka ngokuthe ngqo ngakumbi ukusuka kumazibuthe olahliweyo ukuya kwimveliso yokuphela-umazibuthe omtsha.
Inkqubo yokuLungiswa kweMagnet ichaziwe
Iimagnethi ezilahliweyo zeHDD ziyaqokelelwa
Nawuphi na umaleko okhuselayo uyasuswa
Iimagnethi zichotshoziwe zibe ngumgubo
Isitshizi sePlasma sisetyenziselwa ukufaka izinto ezinomgubo ngombane kwi-substrate
Izinto ezinxitywayo zinokwahluka ukusuka ku-½ ukuya ku-1 mm ubukhulu
Iipropathi zokuphela kwemveliso kazibuthe zinokwenziwa ngokwezifiso ngokuxhomekeke kulawulo lokuqhubekeka
Ngelixa izixhobo ezitsha zemagneti zingenako ukugcina izinto ezizodwa zemagnethi yezinto zentsusa, inokuthi izalise iimfuno zentengiso kukhetho lwezoqoqosho apho ukusebenza kwamandla ombane onqabileyo womhlaba ongafunekiyo kungafuneki, kodwa iimagnethi zomsebenzi ezisezantsi ezinjengeeferrites azonelanga .
“Lo mba wokunciphisa inkunkuma wale nkqubo ngenene uphindwe kabini; asisebenzisi nje kuphela iimagnethi zokuphela kobomi, ”utshilo u-Ott. “Sikwahlisa nenani lemveliso yenkunkuma eveliswayo ekwenzeni oomazibuthe abancinci nabancinci ngeemveliso ezinkulu ezinkulu.
Ixesha Post: Apr-22-2020